Golaha Wasiirada ee Wadanka Faransiiska oo shir deg deg ah ka leh weeraradii ka dhacay Magaalada Paris - iftineducation.com
Golaha Wasiirada ee Wadanka Faransiiska oo shir deg deg ah ka leh weeraradii ka dhacay Magaalada Paris
iftineducation.com – Golaha Wasiirada Faransiiska, ayaa waxay shir deg deg ah ay ka lee yihiin weeraradii 3-da maalmood qaatay, ee Arbacadii ilaa Jimcihii ka kala dhacay Magaalada Paris.
Wasiiradu waxay ka doodi doonaan tallaabadii uu Faransiiska kaga jawaabi lahaa weeraradaasi, oo lagu dilay 17 ruux, oo u badan Suxufiyiin iyo Saraakiil ka tirsan Booliska Magaalada Paris. Booliska la dilay laba ka mid ah waa rag, halka labada kalana ay dumar yihiin.
Al Qaacidada Gacanka Carbeed, ayaa waxay sheegatay masuuliyadda weerarka Arbacadii lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo, oo ku yaala Bartamaha Magaalada Paris ee Xarunta Wadanka Faransiiska.
Harith Bin Ghazi Al-Nadhari oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Al Qaacidada Yemen, ayaa muuqaal uu soo saaray ku bayaaniyay in iyagu ay ka dambeeyeen, weerarkii qorsheysnaa ee lagu laayay Suxufiyiinta Wargeyska Charlie Hebdo.
Madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo shir jaraa’id qabtay ka dib weerarada Paris, ayaa wuxuu sheegay in dadkii geystay ay yihiin dad waalaaa, oo xamaasadeysnaa, sida uu yiri.
Magaalada Paris waxaa lagu wadaa in maalinta berrito ah lagu qabto isku soo bax ballaaran, iyadoo la filaayo inay ka qaybgalaan madax ay ka mid yihiin Ra’iisal Wasaare-yaasha Britain iyo Germany.
In ka badan hal milyan oo ruux oo isugu soo baxay Madaxtooyada Jamhuuriyadda Faransiiska